777-200ER FMC EGO
777-200ER FMC EGO 4 izu 6 awa gara aga #1856
Mgbe m tụgharịrị na ngalaba nkọwa nke nbudata ahụ, achọtala m ihe ngwọta. Kwesịrị idezi faịlụ nke 777fmc.dll na-abịa na nbudata ahụ. A na-e /omi / dozie osisa dị n'okpuru. Ekele nile diri Ariel Terkeltoub. Agbalịrị m ime ihe ndozi a, mana mgbe m mepere faịlụ site na iji Notepad, ọ ga - agaghim agụ. Ana m eji Windows 10. E nwere ihe ngwọta nye nsogbu m? Daalụ!
Maka ndị niile nwere nsogbu na FMC ma ọ bụ VC n’ozuzu, tinye ahịrị ndị a ozugbo a tupu akara ngosi </SimBase.Document>:
<Disabled> segha </Disabled>
<DllStopName> mod_deinit </DllStopName>
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: Egwu egwu1, dyttffrr44
777-200ER FMC EGO 3 izu 5 ụbọchị ago #1862
Ana m enwe nsogbu ụfọdụ ịchọta faịlụ .dll.
M ji 64bit desktọpụ ya na Windows 10.
Could nwere ike igosi m ụzọ ziri ezi biko?
777-200ER FMC EGO 3 izu 5 ụbọchị ago #1863
Echere m, ị gụrụ ụdị ahịrị ndị a na faịlụ dll.xml, anaghị edezi 777fmc.dll.
777-200ER FMC EGO 3 izu 5 ụbọchị ago #1864
C: / Ndị ọrụ / "Aha njirimara" / AppData / Raoming / Microsoft /FSX
777-200ER FMC EGO 3 izu 5 ụbọchị ago #1865
Ikwesiri itinye ahịrị ndị dị n’elu na DLL.xml faịlụ nke dị na:
C: \_ Ndị ọrụ 'YOUUSERNAME \_ AppData \_ agagharị \_ Microsoft \_FSX
Mepee DLL.xml faịlụ nwere mpempe akwụkwọ wee gbakwunye data ọ kwesịrị ịrụ ọrụ!
777-200ER FMC EGO 3 izu 5 ụbọchị ago #1866
Enyochala m ụzọ a, mana enweghị m faịlụ akpọrọ "AppData". Nke a ọ bụ nsogbu? Ọ bụrụ otu a, olee otu m ga-esi edozi ya? Aghọtara m ma ọ bụrụ na ịmaghị etu esi eme ya.
777-200ER FMC EGO 3 izu 5 ụbọchị ago #1867
Echegbula, achọtara m ihe ngwọta site na iji akara n'ụzọ ziri ezi kama ịga na folda nke folda.
777-200ER FMC EGO 3 izu 4 ụbọchị ago #1868
Agbalịrị m itinye iwu ọhụrụ ahụ, mana enweghị isi. N'ihi ọdịdị nke faịlụ a, yana enweghị m ihe ọmụma banyere otu esi edezi faịlụ, emebebeghị m ndabere. Echere m na enwere m ike iwepụ ma wụnye ngwugwu ahụ. EGO NA-EGO EGO!
777-200ER FMC EGO 3 izu 4 ụbọchị ago #1869
Porịọ mgbaghara maka ịbụ ihe na - enye nsogbu, mana ọ ga - ekwe omume ịkekọrịta 'nnomi' nke ihe gị. dll nchekwa nwere, gbasara otu ụgbọelu dị?
O kwesiri inye aka na idozi nke a.
Achọpụtara m ihe karịrị otu faịlụ, ya mere arịrịọ ahụ.
M ga-anwale ma zitere gị nseta ihuenyo (ihe m nwere na mbụ, yana mgbakwunye).
777-200ER FMC EGO 3 izu 3 ụbọchị ago #1871
Ihe nseta ihuenyo gosipụtara folda ndị bụ isi, yana nke akọwapụtara.
You nwere ike ịhụ na enwere nhọrọ atọ (3) na nseta ihuenyo mbụ? : dll, dll.xml na DLL_XML
Onye ọ bụla nwere ndenye, mana m weere nseta ihuenyo nke DLL_XML.
Oge ike page: 0.344 sekọnd